ဖေဖော်ဝါရီလကတည်းက ပါးစပ်ပိတ်နေတဲ့သူမကို LIVE လွင့်ဈေးရောင်းတိုင်းဝိုင်းဆဲနေကြလို့ ဆုံးရှူံးမှုတွေများနေတယ်ဆိုတဲ့ ထက်ထက်မိုးဦး…. – Shwe Yoe
ဖေဖော်ဝါရီလကတည်းက ပါးစပ်ပိတ်နေတဲ့သူမကို LIVE လွင့်ဈေးရောင်းတိုင်းဝိုင်းဆဲနေကြလို့ ဆုံးရှူံးမှုတွေများနေတယ်ဆိုတဲ့ ထက်ထက်မိုးဦး….
Shwe S N | September 3, 2021 | Celebrity | No Comments
တစ်ချိန်ကကြောငြာဘုရင်မလို့တောင်တင်စားရတဲ့အထိအောင်မြင်ခဲ့တဲ့မင်းသမီးကြီးထက်ထက်မိုးဦးကတော့ကိုဗစ်ကာလမှာတန်ဖိုးကြီးပစ္စည်းတွေကို live လွှင့်ပြီးရောင်းချရာမှာစံချိန်တင်ရောင်းချနိုင်ခဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ထက်ထက်ကတော့ အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာလူထုလှုပ်ရှားမှုမှာမပါဝင်ခဲ့ဘဲအချိန်အတော်ကြာပျောက်နေခဲ့တာဘဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာထက်ထက်မိုးဦးကသူ့ဘဝရဲ့ ရုန်းကန်လှုပ်ရှားနေရပုံကိုအခုလိုပြောပြလာပါတယ်။
ပျက်ဆီးဆုံးရှူံးနေရချိန်မှာလည်းကံကြမ္မာကိုအပြစ်မပုံနိုင်ပဲအကောင်းဆုံးခံနိုင်ရည်ရှိအောင်ပဲထက်ကြိုးစားနေပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်ရေးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော် Onlineကတွေ့လို့နဲနဲလေးကူးယူရေးထားပါတယ်။အမှားပါသွားရင်လည်းထက်ကပဲတောင်းပန်ပါတယ်။
နောက်တစ်ပွဲနိုင်ပြီးရင် ချန်ပီယံခါးပတ် ကို ပြန်လုမယ် လို့ ပြောလိုက်တဲ့ မြန်မာဂုဏ်ဆောင် အောင်လအန်ဆန်း
သွယ်လျနေတဲ့ခန္တာကိုယ်လေးနဲ့ အရမ်းကို ချစ်စရာကောင်းနေတဲ့ မော်ဒယ်လ် အယ်လာ ရဲ့ ပုံရိပ်လေး များ
အိမ်ထဲမှာပဲနေမယ် မင်းကိုလည်း လွမ်းနေမယ်လို့ ဆိုရင်း ပုံလေးတွေတင်ပေးလိုက်တဲ့ မျက်ဝန်း
ဖက်ရှင် လန်းလန်းလေး နဲ့ ရင်ခုန်စရာ ကောင်းနေပြီး ဘာဘီအရုပ်မလေးလို လှပနေခဲ့တဲ့ ရွှေကစ်